ICCA: Colombia dị na mba 30 kachasị elu maka nzukọ njegharị
Home » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » ICCA: Colombia dị na mba 30 kachasị elu maka nzukọ njegharị
Nchịkọta kwa afọ nke International Congress and Convention Association (ICCA) gosipụtara na Colombia so na mba 30 kachasị elu ndị na-akwado ọgbakọ mba ụwa. N'afọ gara aga, Colombia kwadoro mmemme 147, nke 29th, karịa Russia, New Zealand, Chile, na South Africa, na ndị ọzọ.
Ndepụta a, akpọ ICCA Statistics Report Country & City Rankings, gụnyere mba 165, na-egosi ikike Colombia na uru asọmpi na njem ndị njem na nzukọ. Iji maa atụ, Colombia nọgidere bụrụ onye nke atọ na South America - karịa Brazil na Argentina - maka ọtụtụ mmemme otu ICCA emere.
Nsonaazụ ndepụta a na-ekwu okwu ọma maka ikike njem nlegharị anya nke Colombia. O doro anya na anyị chọrọ ime njem nleta dị ka ihe ọhụrụ na nke pụtara ìhè nke mmụba akụ na ụba na ego ndị si mba ọzọ, dị ka ụzọ isi mee ka ịha nhatanha na azụmaahịa na mpaghara Colombia, "José Manuel Restrepo Abondano, Mịnịsta nke Azụmaahịa, Mmepụta, na Njem Nleta kwuru.
N'aka nke ya, Flavia Santoro, onye isi oche nke ProColombia, kwuru, "Nke a bụ nnukwu akụkọ, na-akwado na Colombia bụ ebe mara mma na asọmpi maka nnabata mmemme mba ụwa dị elu. Anyị ghọtara mkpa njem njem azụmahịa dị. Ya mere, na ProColombia, anyị na ndị isi mpaghara, ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ azụmahịa na-arụkọ ọrụ iji gaa n'ihu na-adọta ihe omume ga-emetụta Colombia na ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa si mba a. "
Akwụkwọ a na-agụnyekwa akụkọ zuru ezu banyere mmetụta nke ihe omume ndị Colombia dọtara. Dịka ọmụmaatụ, ọ kpughere na ndị mmadụ 50,313 gara nnọkọ otu 147 ICCA na-eme na Colombia na 2018, na-ewepụta ego ruru US $ 84 nde. Onye nleta ọ bụla nọrọ nkezi nke US $ 465.60, na ihe omume ogologo nkezi 3.6 ụbọchị.
Ọzọkwa, Bogotá kwadoro ihe omume 46 na 2018-karịa obodo ọ bụla ọzọ dị na Colombia-nke mere ka ọ bụrụ nke isii na Latin America maka ọtụtụ ọgbakọ a na-enwe, n'azụ Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile, na Panama City. Bogotá na-esote Cartagena, yana ihe omume 35, na Medellín, na 25.
Ndepụta a gụnyere ihe omume emere na obodo ndị ọzọ dịka Cali, Barranquilla na Santa Marta. Santa Marta gosipụtara uto kachasị, ebe ọ bụ na obodo ahụ akwadoghị ọgbakọ ọ bụla na 2017, wee nabata 5 na 2018. Barranquilla pụtakwara, site na ịnabata ihe omume 3 na 2017 ruo 6 n'afọ na-esote.
N'ọnwa Nọvemba gara aga, ICCA kwupụtara na a họpụtara Cartagena ka ọ nọrọ na 2021 World Congress, họpụtara obodo asọmpi dịka Rotterdam na Athens.
Ihe omume a na-esonye na mmemme ndị ọzọ ama ama na mba ụwa site na Colombia, dịka World Tourism Organization's Tourism Tech Adventures, haziri na Eprel nke afọ a; ndị World Pharmacovigilance Congress (2019); Nzukọ Mgbakọ Ọchịchị Worldwa (2019); onyinye nnwere onwe nke ụwa (2019); Nzukọ World IDB (2020); na Fiexpo Latam maka afọ 2020, 2021, na 2022, na Cartagena, Medellín, na Bogotá.
Maka gọọmentị Colombia, ịkwalite mba ahụ dịka nzukọ njem njem na-enye aka na ịmepụta ọrụ na ọrụ na-apụ apụ na ụlọ ọrụ ndị njem yana ụzọ kachasị mma maka ebe mgbakọ, ebe mmemme nkwari akụ, na ebe ndị na-abụghị ọdịnala na Colombia niile.
N'oge na-adịbeghị anya, Ministri Azụmaahịa, Mmepụta, na Njem Nleta gosipụtara Atụmatụ Atụmatụ iji bulie njem njem MICE (Nzukọ, Ntugharị, Mgbakọ, na Ngosi). Ebumnuche atụmatụ a bụ ka Colombia duru Latin America na nzukọ njegharị site na afọ 2027. Ihe omume a ga-atụ aro iji kwalite nzukọ na ihe omume na Colombia.
Ndị Australia si India na-eme njem lebara anya dị ka ndị omekome
Nkwado Hotel Investment Platform Cee na Caucasus HOTCO 2021 yigharịrị